Nagarik News - यत्तिकै बितेको एक वर्ष
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले अघिल्लो साता सरकारले एक वर्षको अवधिमा गरेका करिब डेढ सय उपलब्धिको लामो सूचि सार्वजनिक गरेका थिए। सरकारले हासिल गरेका भनिएका उपलब्धि जनताले पढिनसक्दै उनै प्रधानमन्त्री कोइरालाले आमजनताको चाहना र आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका कोइरालाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा सरकारको कामलाई लिएर चर्को आलोचना भएपछि उनले 'बाहिर राम्रो काम गर्छु भने पनि सरकारमा गएपछि सोचेजस्तो गर्न नसकिने रहेछ' भन्दै सहानुभूति बटुल्ने कोसिस गरेका छन्। आर्थिक पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारिता र जनमुखी (राहत) कार्यक्रमलाई प्राथमिता दिनुभन्दा ढिलासुस्ती, झिनामसिना कार्यक्रम र काममै सरकारले समय गुजारेको छ।
सरकारले एक वर्षमा धेरै राम्रा काम गरेको फुइँ लगाए पनि सत्तारूढ पार्टीका नेताले नै सरकारको कामलाई लिएर औपचारिक रूपमै आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला खिन्न देखिन्छन्। उनी यो एक वर्षको अवधिमा विवादमा परेका छैनन्। तर, उनको क्याबिनेटका मन्त्रीले गरेका थुप्रै निर्णय विवादको घेरामा तानिएका छन्। तीन महिनादेखि खाना पकाउने ग्यासको चर्को अभाव हुँदा पनि सरकारले त्यसलाई सहज बनाउन सकेको छैन। दुईपटक दूधको भाउ बढाइएको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको भाउ धेरैपटक घटिसक्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले नै भ्रष्टाचार बढेको भन्दै निराश भएर भाषण गरेपछि उनको शून्य सहनशीलताको कुन हबिगत छ भन्ने प्रमाण अरूले जुटाउनै पर्दैन। पोखरामा निर्माण गर्न लागिएको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ठेक्का लगाउँदा करिब छ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्री कोइराला नाजवाफ भएका थिए। 'कि त ठेक्का प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्योा होइन भने छ अर्ब रुपैयाँमा हाम्रो पनि भाग लाग्नुपर्यो।' भन्दै केन्द्रीय नेताहरू बैठकमा कड्किएका थिए। सार्क शिखर सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर सरकारले गरेको खर्चमा भएको ब्रह्मलुटले त प्रधानमन्त्रीको नाकको टुप्पोमै कालो पोतिदिएको छ। विभिन्न निकाय तथा मन्त्रालयले सार्कका नाममा गरेका भनिएका खर्च विवरण र कामको प्रकृति हेर्दा सर्वसाधारण जनता चकित परेका थिए। सार्क सम्मेलनका लागि गरिएको भौतिक निर्माण तथा अन्य खर्चमा भ्रष्टाचार भएको समाचार मिडियामा आएपछि केही मन्त्रालय तथा निकायले भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका फाइल रोकिएका थिए। पहिला धेरै रकम दाबी गर्ने मन्त्रालय तथा निकायले अहिले रकम घटाएर भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका छन्। सार्कका नाममा फास्ट ट्र्याकबाट जथाभावी खर्च गर्दै अनियमितता गरिएको थियो भन्ने यो भन्दा दर्बिलो प्रमाण के हुन सक्छ? पहिला धेरै दाबी गर्ने अनि भुक्तानी रोकिएपछि तथा भ्रष्टाचार भएको कुरा उठेपछि रातारात रकम घटाएर फाइल पेश गर्ने निर्लज्जहरूलाई प्रधानमन्त्रीले किन प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन्? यसैबाट थाहा हुन्छ– प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार कति सुशासनमैत्री छ?
प्रधानमन्त्री हुने बेलामा कोइरालाले गरेका बाचा एक वर्षको अवधिमा पूरा गर्न सकेनन्। माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने, छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने, विभिन्न देशमा खाली रहेका राजदूत नियुक्ति गर्ने लगायतका काम प्रधानमन्त्री कोइरालाले गर्न सकेनन्। अघिल्लो वर्षामा पश्चिम नेपालमा आएको बाढी–पहिरोबाट विस्थापितहरूले अहिले सम्म पुनःस्थापना र भरपर्दो राहत पाउन सकेका छैनन्। पार्टी कार्यकर्ताले चौतारो उद्घाटन गर्न बोलाउँदा हेलिकप्टर चढेर पुग्ने गरेका प्रधानमन्त्री कोइरालाले बाढी–पहिरोबाट विस्थापितहरू बसिरहेको क्षेत्रमा भ्रमणसमेत गरेका छैनन्। कोइराला नेतृत्वको सरकारले जनमुखी काम गर्न सकेको छैन। प्रतिबद्धताअनुसार माघ ८ मा नयाँ संविधान जारी गर्नुको साटो दलहरू विवादित र विभाजित बनेका छन्। संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्यासई देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गरेर विकास निर्माणमा अग्रसर हुनुपर्नेमा दलहरूको बीचमा ध्रुवीकरण बढेको छ। यो ध्रुवीकरण रोक्ने र संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्ने काममा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो क्षमता र दक्षता देखाउन सकेका छैनन्। यसअघिका सरकारको दा"जोमा प्रधानमन्त्री कोइरालाका लागि सरकार सञ्चालनमा सबैभन्दा अनुकूल वातावरण भए पनि उनले त्यसलाई उपयोग गर्न सकेनन्। दुई तिहाइको समर्थन तथा कमजोर प्रतिपक्ष रहेको अवस्थामा कोइरालाले चाहेको काम गर्न सक्थे। जनहितका लागि थुप्रै निर्णय र नीति निर्माण गर्न सक्थे। प्रधानमन्त्री कोइरालाको सरकार सञ्चालनका लागि योग्यता, क्षमता, दूरदृष्टि, आपसी तालमेल मिलाउने खुबीको अभाव हुँदा सरकार दिशाहीन बनेको छ। सत्ताबाहिर रहेका दलहरूसँग सहमति जुटाउने चुनौती बोकेको कोइराला नेतृत्वको सरकारले सत्ता सहयोगी दल नेकपा एमालेलाई कसरी खुशी तुल्याउने भन्दाभन्दै एक वर्षको अवधि गुजारेको छ।
एसएलसी परीक्षाको तयारी गरिरहेका दुई किशोरीमाथि काठमाडौँको केन्द्र बसन्तपुर पुण्यबहाल टोलमा रहेको ट्युसन सेन्टरमा भएको एसिड प्रहारले राजधानीवासी भयभित बनेका छन्। छिमेकी देश भारत र नेपालको तराइ क्षेत्रमा एसिड प्रहारका घटना हुने गरेको समाचार सुन्दै आएका राजधानीवासीका लागि यो घटनाले थप चिन्तित बनाएको छ। प्रेम प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि किशोरीमाथि हुने यसप्रकारका आक्रमणका दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाही हुन नसकेकाले नै यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिने गरेका छन्। एसिड प्रहार गर्नेलाई कारवाही गर्ने छुट्टै कानुनको अभावमा यस्ता घटनाका दोषीहरू सजिलै उम्किने गरेका छन्। प्रहरीले ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेपनि कमजोर कानुनको फाइदा उठाउँदै दोषी उम्किहाल्ने अवस्था छ। त्यसैले एसिड प्रहार गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीका लागि सरकारले छुट्टै कानुन बनाउन तदरुकता देखाउनु पर्छ।
मलेसियन भिसामा नयाँ किचलो
मलेसियाले नेपाली कामदारका लागि भिसा प्रक्रियामा नयाँ किचलो उत्पन्न गराएको छ। मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई बिदामा घर आएर फर्कंदा हस्तलिखित र एमआरपीमा भिसा र पुनः श्रम स्वीकृति भए पनि हस्तलिखितबाट...